Zaikabe sy Fivoriam-be hitondra fivoarana ho an’ny fikambanana
Nosokafana ny alatsinainy 30 aogositra tao amin’ny Ekar Md Piera Ambohipo, tamin’ny alalan’ny sorona masina notarihan’i Mgr Pascal Andriantsoavina sy ireo Pretra manerana ny Nosy ny zaikabe sy ny fivoriam-be an’ny Fanilon’i Madagasikara skoto zazavavy katolika.
« Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy »
Fomba fiteny sy zara toy ny baikom-pitolomana mihitsy ny hoe « Fitiavana sy fahamarinana ». Tsara anefa ny manamarika fa fomba fiteny notovozina avy tao amin’ny Soratra Masina izany ary tsy fomba fiteny fotsiny fa tondrozotra enti-miaina ny maha kristianina sy foto-kevitra enti-maneho ny maha endrik’i Kristy.
« Jesoa mpiandry ondry tsara »
Miditra amin’ny herinandro fahefatra ny fibanjinana an’i Jesoa Kristy nitsangan-ko velona ny litorijia amin’ny alahady anio. Saingy, mbola mitohy hatrany ny olana ateraky ny valanaretina covid-19 izay mitarika ny hamehanaara-pahasalamana. Maro ny fiangonana natao hivavahana sy hanaovana lamesa no tsy mahazo misokatra. Indro ny famoaboasana ireo vakiteny nataohanampy anao any antrano sy fiara-mivavaka any.
« Velona Marina i Kristy: miara-misakafo, mifampizara ny manta sy ny masaka, amin’ny mpianany Izy »
Maromaro ny distrika fiangonana no nanapa-kevitra hanakatona ny trano fiangonana. Vao mainka manan-danjany famoahana ny fanadihadiana momba ireo vakiteny telo tokony ho renesina amin'ny alahady 18 avrila izao. Mazotoa ary miomana sy mifanohana isan-tokan-trano.
« Mahery ny Finoana omban’ny Fanantenana sy Fitiavana …».
Malala il y a 7 mois
Alahady faharoa fankalazana ny Paka, alahadin’ny famindram-pon’Andriamanitra, alahadin’ny finoana sy fanantenana ary fitiavana.